Mafana milina fanontam-pirinty, Mug Mafana milina fanontam-pirinty, Cap Mafana milina fanontam-pirinty, milina fanontam-pirinty Label Hafanana - Xinhong
Cap Heat milina fanontam-pirinty
Soraty Heat milina fanontam-pirinty
Fitaovana hafanana amin'ny hafanana
Satroka & Satroka
Famakiana totozy Sublimation
Smart & matihanina novolavolaina tontonana fanaraha-maso mikasika efijery miaraka amin'ny mpampiasa namana fandaharana, mora ampiasaina sy ny fampisehoana tsara.
Ny takelaka fanamainana matevina sy tsara indrindra amin'ny alàlan'ny famerenana ny hafanana haingana kokoa dia miantoka ny fanerena hafanana na dia ny fizarana hafanana sy tsindry aza.
Fampiasam-bola novolavolaina matihanina sy fitaovana mba hahazoana antoka fa mijery tsara ny milina fametahana hafanana ary mahavita tanteraka.
Ny kojakoja UL na CE voamarina dia ampiharina mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny milina fanontam-pirinty mafana sy ny fahamarinan-toerana, ny fiainana lava be.
EasyTrans ™ Manome tanana
EasyTrans ™ kambana torolàlana
EasyTrans ™ kambana Electric
Mihoatra ny 18 taona traikefa
Hatramin'ny taona 2002 ary nanangana indray ny Xinhong Group Limited tamin'ny taona 2011, dia niara-niasa tamin'ireo mpaninjara isan-karazany amin'ny sehatry ny famindrana hafanana izahay mba hanomezana ny mpanjifanay milina fanontam-pirinty hafanana avo lenta ary nahazo laza tsara.
Mihoatra ny 100 ny mpiasa sy ny ekipa mahay
Ny ekipa Xinhong dia misy fanohanana ara-teknika mahay, ekipa QC azo itokisana ary mpiasa voaofana tsara, miantoka ny milina fanontam-pirinty mafana rehetra dia vita amin'ny fenitra avo lenta ary tena miorina tsara.
Warranty serivisy 5 taona amin'ny frame
Xinhong dia manome antoka 1 taona amin'ny singa milina fanontam-pirinty lehibe toy ny herinaratra, fiantohana 5 taona amin'ny rafitra milina ary ny fiainan'ny fanohanana ara-teknika.
Ankafizo ny fanamboarana miaraka aminay ary amboary ny milina fametahana hafanana
Serivisy varotra azo itokisana sy fanohanana matihanina miandry anao
Ny piesy rehetra dia voamarina CE na UL ary nosedraina mafy
Mba andefaso olona antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.
Ahoana ny fampiasana milina fanontam-pirinty mba hanamafisana tanteraka ny tavoahangy mahia?
Machine Ultra Electric Tumbler Heat Press ho an'ny Sublimation Skinny Tumblers
Fampidirana Automatic Dual Platens Electric Heat Press Machine B2-2N Smart V3.0
Mini Rosin-tech Heat Press （Modely#HP230C-2X） Boky fampiasa
Hydraulic 5-10 taonina Rosin-tech Heat Press （Model#HP3809-M） Boky fampiasa
© Copyright - 2010-2021: Zo rehetra voatokana. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - DIEM Mobile
Ball Pen Mafana Press Machine , Heat Press Pen Printer , Mafana Press Labels , Ball Mafana Press Machine , Gazety hafanana ho an'ny pensilihazo, Small Label Mafana Press Machine ,